トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語
Anqume esiqhingini ezishisayo langena wamakhaza pachinko
Esikhathini eshintsha pachinko, umshini pachinko iwumkhiqizo. Leli lungiselelo wamakhaza pachinko models, ngokoMthetho nezinye izimboni, siyoba esifanayo njengoba oyibonisayo izimpahla. Ngo wamakhaza ...
Bona ngokusebenzisa ukucushwa iqembu Horukon e wamakhaza pachinko
Igama pachinko ukucushwa iqembu, ngokuvamile ngokuvamile angase emagama langakatayeleki Uma wena pachinko kumnandi, ungatholi usizo lwakho kodwa wathi lokho ukucushwa iqembu ngokwayo akulona. Njengoba...
Ekupheleni kwenyanga, ngasekupheleni wamakhaza pachinko kwesici (inkathi yokutakula noma evulekile-ukuphila)
※ kumane ekuphelenipachinko emakhazeni Sicela ubheke njengoba umkhuba yonke umkhakha, ngicabanga abanye abantu abaye ngizwa amahemuhemu ukuthi ngeke aphume. Eqinisweni, kulungile. Ukuphela wamakhaza p...
Emihle nemibi sasemakhazeni pachinko we isilinganiso ukuguqulwa
Lapho uya pachinko futhi slot, ngicabanga kuqala ukuthi isilinganiso ukuguqulwa ukukhathazeka. Common e sasemakhazeni pachinko, inani ibhola lapho njengokukwethembisa kwakhe, utsheleke amakhasimende, ...
Hanemono Kulungile imfundiso umngcele?
Eminyakeni yamuva, ngoba esikhishwe magazini eziningi pachinko, ulwazi sekulula ngakho ukungena isandla. Ngakho, uma umuntu hit pachinko, kanye, mina think're nesithakazelo kokubona ukuthi wabona ngit...
Hlola amakhasimende base of pachinko eshintsha
Ngo-pachinko eshintsha ezihlukahlukene amakhasimende ziye kokuza esitolo. Ingabe ubani ngezikhathi hamba ukudlala, kodwa ngicabanga ukuthi akusiyo okuningi uyathanda ikhasimende base, e wamakhaza pach...
Hlola ijubane esikhundleni Xintai of pachinko wamakhaza
Kwasukasukela e sasemakhazeni pachinko kufana umcimbi omkhulu Ekhuluma esikhundleni Xintai, kwaba okwakwenziwa ngejubane of mayelana kanye eyodwa noma izinyanga ezimbalwa ngenyanga. Okwamanje akukho u...
Hlola isici-umkhuba of pachinko emakhazeni [Horukon Setha Operations]
Lapho abantu abaningi ababekhuphuke ukudlala e sasemakhazeni pachinko, ngicabanga ukuhlola idatha isibani idatha. Uma ungenalo ukubheka idatha, lapho yesikhulumi onjani ukugeleza, engazi uye anayo. Id...
Hlola isici-umkhuba of pachinko emakhazeni [nail ukulungiswa nezinzipho IsAm ed.]
Lapho ngokuvamile waya ukudlala e sasemakhazeni pachinko, ngicabanga ukuthi siyokubona inhloso yokuqala nguye imodeli ngomunye. Ngakho, kuba ukulungiswa isipikili ngifuna nithole. Nail ukulungiswa, no...
Hlola isici-umkhuba of pachinko emakhazeni [Roma wave Operations]
Hit kwaba, ke wavers phakathi ithemba nokwesaba futhi akusho hit kanye, ngicabanga ukuthi i-pachinko injabulo yangempela. Nokho, lapho kugadla okungukuthi, ukuba ezinye izinto ixhumana Chang, lapho un...
Horukon ephezulu sici-ukubona ngokusebenzisa indlela ukubeka
Ngo Horukon bamba, ke kuthiwa zimisiwe division. Pachinko esitolo, uma Uchikome ilitshe yokuthengisa Horukon, futhi ngokukhululekile ukubala izinga ukunciphisa, wena kusho ukulawula yokubhadala.Isipha...
Horukon futhi ukumisa iqembu
Ngo Horukon bamba, ke kuthiwa basakaza jackpot ngokuzibeka ngeenqhema umshini pachinko e transformer. Ngakho, kuthiwa aphumelele Horukon bamba, ngifuna ukubona ukuthi hlobo luni izinto ngobudlelwane p...
Horukon ongaphakeme-isethi sici, bona ngokusebenzisa indlela ngesikhathi
Ngo-computer, futhi isethi yokuthengisa, iyona bamba ihholo conserver wukuthi ungakwazi ukulawula yokubhadala. Njengoba isigaba ukunquma iphesenti wenkokhelo, ephezulu isethi, kulungiselelwa phakathi,...
Uma ungazi kahle, sasemakhazeni pachinko kule Horukon is, kubonakala abanye abantu bacabanga ukuthi ayikho emthethweni, ezifana kude, original awuwona ngempela umshini into enjalo. I Horukon, iyona is...
ibhizinisi Jwayelekile ngesikhathi yesikhulumi lokukhetha sasemakhazeni pachinko
Bheka ukuqinisekisa ukushiya yesikhulumi i indaba azinakwenzeka kodwa, ukuze kuvinjelwe nokumosha ukutshalwa kwezimali, idatha nezinzipho iyindawo ufuna ukubona. Ngo, ethebuleni ukukhetha ngesikhathi ...
Imeyili kusuka pachinko emakhazeni engenamsebenzi ethebuleni ukukhetha
Wena, ebhizinisini e-mail of sasemakhazeni pachinko, noma okuqukethwe efanayo ngaso sonke isikhathi, ngicabanga ukuthi kungaba khona eziningi uthola umyalezo ukuthi banomuzwa wokuthi akusizi kakhulu. ...
Imeyili kusuka pachinko emakhazeni ewusizo ethebuleni ukukhetha
Ngo-pachinko eshintsha, ke ithumele ibhizinisi e-mail kosuku njengoba imisebenzi yokusebenza. E-mail ingxenye kakhulu, ekuseni ovuliwe ngaphambi kanye kwasemini, futhi uye waba eziningi pachinko emakh...
Imininingwane pachinko Ngempumelelo eqoqwe usebenzisa isayithi idatha Robo Eziyisikhombisa
Kukhona indawo pachinko ukuthi isayithi idatha Lobo Eziyisikhombisa. Ngendlela efanayo njengoba P-WORLD embonini ulwazi indawo, ungabona ezifana search ulwazi imodeli futhi pachinko ihholo, ezihlukahl...
Imininingwane pachinko Ngempumelelo eqoqwe usebenzisa P-WORLD
Kungcono ukuba pachinko kuyinto, ngicabanga eziningi kubantu usebenzisa p-jikelele. Indawo, ngakho umuntu ingabonwa kalula, kuba baqoqe isibe indawo esisemqoka.Esikhathini p bomhlaba, ukuthi yebo ulwa...
Indlela yokuthola izitolo kakhulu ukuthi ukusizakala umagazini e-mail kusuka wamakhaza pachinko
Wonke umuntu kusukela pachinko eshintsha, ulwazi lebhizinisi izenzakalo futhi ngosuku, ngicabanga ukuthi abanye abantu baye bahileleka eposini. Ngoba zonke izinsuku ukufinyelela yini ama-imeyili, ngiy...
Into ebaluleke lapho ecindezela etafuleni inhloso ukubona igrafu ukuwa e sasemakhazeni pachinko
Kwakamuva pachinko emakhazeni, isihenqo esikhulu nge umshini okuthiwa i-idatha Lobo, izitolo ukuthi basuke efakwe isibe eziningi. Esitolo bengaphambili ukuvulwa kanye counter ngaphambi, njll, kule ums...
Inyanga maphakathi no-maphakathi nawo-pachinko emakhazeni kwesici (inkathi yokutakula noma evulekile-ukuphila)
※ ukuhlala isikhathi eside njengoba umkhuba yonke umkhakha labopachinko Izintandokazi Sicela ubheke ukuthi, bangase babe nakho abantu obaziyo, ukuqhudelana sasemakhazeni pachinko iyona maphakathi lwen...
ithebula pachinko esitolo ukukhetha ngesikhathi uwavule
On the kuqala usuku esikhundleni Xintai, idatha ke akukho, ngokuba isimo ulwazi khona, ukuze Neraiuchi ukukhetha platform yinto enzima. Xintai ngosuku lokuqala, akusho ukuthi evulekile kusukela ekusen...
Ithebula ukukhetha ngesikhathi pachinko eshintsha umcimbi
Pachinko emakhazeni ngesikhathi umcimbi sibonakala nakakhulu yesithombe yempikiswano, kodwa ayikho into enjalo. Njalo ithebula yokutakula ngisho ngesikhathi umcimbi abakhona. Yiqiniso, njengoba esiqhu...
Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela Horukon Lesisemkhatsini kulungiselelwa isikhathi
Ngo Horukon bamba, bekungenxa bakwazi usethe ibhola no- Horukon. Phakathi kwabo, ukufakwa okusezingeni eliphezulu, kulungiselelwa Lesisemkhatsini, ukuthi ephansi isethi nezinhlobo ezintathu abakhona. ...
Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela namagagasi ROM isikhathi ecasukile
Ngo wamakhaza pachinko, ingabe ucabanga ukuthi ngokuvamile platform besacasukile engcono. Uma kungenjalo, ngoba kwakuzosho ukuthi kumelwe babe akaphinde asibalele yokuthengisa of pachinko emakhazeni. ...
Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela namagagasi ROM isikhathi namandla
umshini pachinko jackpot sinqamukile kuzo zonke ukuphathwa ROM. Uma Minukere isigaba okunamandla ROM, ayanda amathuba ukuthi givin jackpot. Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi kukhona isici esigabeni waj...
Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela namagagasi ROM ngokuvamile ukuphila
Pachinko umshini we ROM, isikhathi namandla, ngokuvamile isikhathi, ihlukaniswe ukuwa isikhathi. Uma kuqhathaniswa isizini eqinile futhi isikhathi kabi, kungase ukuphila Jwayelekile we tshela nzima. T...
Jikelele evulekile-ukuphila we eshintsha pachinko, sici-ukubona ngokusebenzisa indlela
※ zokugcina Sicela ubheke njengoba isimo sonke umkhakhapachinko yakhiwa komunye umdlalo amakhasimende kanye izitolo ukuthi mane noma ulahlekelwe. Yize kunjalo, uma njalo ulahlekelwe, ngoba amakhasimen...
Jikelele yokutakula esigabeni se-eshintsha pachinko, sici-ukubona ngokusebenzisa indlela
※ futhi zokugcinapachinko emakhazeni Sicela ubheke njengoba isimo sonke umkhakha ngoba inkampani inzuzo kumele kube inzuzo nsuku zonke. Uma ucabanga ngakho, kodwa ukuhumusha Ungahlola futhi ukuthi zon...
Kanjani ukubona ngokusebenzisa isikhathi ezishisa wamakhaza pachinko
Futhi ashisayo noma izoni yesikhathi wena ukuthi singakanani isikhathi, ungase uzwe kahle. Ukuqina izoni yesikhathi, kuye ngokuthi isimo wamakhaza pachinko we indawo kanye isimo ukusebenza kanye yokut...
Khuluma mayelana pachinko impi esifubeni
pachinko Old, abanye kubantu play ezinhle kwakulula ngisho ngaphandle kangaka investimenti. Pachinko kwakamuva kuyinto, ukugembula unamandla kakhulu, ilungele zinyamalale ngemizuzu engaphansi kuka-30 ...
Kubantu abafuna ukuba silinganisele enaleni, imodeli ukufakwa kanye ukucushwa imodeli wamakhaza pachinko
Wena, ngaya esikhungweni sokukhosela emakhazeni pachinko, ngicabanga ukuthi ngokukhetha play onobuhle ukubheka lonke esitolo sokuqala. Ngakho, uma uzama ukunqoba kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi ngin...
Ngebuhle nebubi kuhloswe ekhoneni ezihlukahlukene e wamakhaza pachinko
Eminyakeni yamuva, sinalo ezandayo pachinko eshintsha ukufaka ekhoneni ezihlukahlukene. uhlangothi Ngokuvamile, sesisungule eceleni a amayunithi ezimbalwa modeli, ku Okunhlobonhlobo ekhoneni, futhi um...
Ngebuhle nebubi kuhloswe imodeli billboard wamakhaza pachinko
Ibhodi onobuhle, ngifuna ukudlala amakhasimende kakhulu wamakhaza pachinko, 's umkhiqizo efakiwe. Ibhodi onobuhle, kodwa ehlukene nge esitolo ngamunye, ngokuvamile kukhona onobuhle eziningi uchungechu...
Ngebuhle nebubi kuhloswe imodeli ingane pachinko eshintsha
Ngisho pachinko emakhazeni ukuthi hamba kini, ngicabanga ukuthi kukhona njalo muhle kakhulu hhayi imodeli ezincane zokusebenzela. Ikakhulukazi, noma sezibekwe maqondana esitolo emhlane, inombolo ezimb...
Ngebuhle nebubi kuhloswe imodeli umcimbi wamakhaza pachinko
Ethebuleni umcimbi, kuyiqiniso ukuthi ngisho pachinko eshintsha kucatshangwa Cishe ukunikela ngo kunokujwayelekile. Nokho, kusho ukuthi yonke yesikhulumi ukulungiswa okunjalo akukhona Yebo. Ngo, ngesi...
Ngebuhle nebubi ukukhetha ongaphakeme ukusetshenziswa izinga pachinko wamakhaza
Okwamanje ngivula umnyango wamakhaza pachinko, egcwele ithebula elingenalutho, ubungase umsindo isimo, futhi lokhu shop'll ugcine stop, ngicabanga ukuthi abaningi abangakholelwa uzizwe lapho kugadla. ...
Ngebuhle nebubi ukukhetha umthamo high ukusetshenziswa pachinko wamakhaza
Wonke umuntu, ireferensi ukhethe pachinko ezitolo, umkhathi inkonzo senkokhelo futhi izitolo, njll, ngicabanga ukuthi ezihlukahlukene lapho, kodwa isimo yokusebenza uma ufuna inzuzo esele kuyoba iphuz...
Ngebuhle nebubi, okuyinto okuhloswe ngaso Xintai e pachinko eshintsha
Ngo wamakhaza pachinko, njll phambi esiteshini, ungakwazi futhi ukudlala kwalethela bakhululwe ngokushesha ngemva Xintai. Ngo, emihle nemibi kuhloswe Xintai ezifana, sizobheka ukuthi ingxenye. Okokuqa...
Noma ukufakwa amamodeli we pachinko emakhazeni ngokuvamile Xintai, noma ngokuvamile sisetshenziswa ithebula
Lilonke kukhona okuningi sasemakhazeni pachinko, kodwa Xintai nezitolo ezitolo futhi esetshenziswa etafuleni eliphakathi nendawo uphakathi nendawo, kukhona ezihlukahlukene pachinko eshintsha. I izici ...
Pachinko emakhazeni izici lesifunda (umehluko inqubomgomo ibhizinisi yi ezisemadolobheni nezisemakhaya)
Njengoba kuyintando sasemakhazeni pachinko futhi inkampani inzuzo, hhayi izitolo kweqiniso unqobile nje amakhasimende. Ngakho-ke, ezinye izimboni kanye, sisuke ezisebenza nenqubomgomo ngamunye esitolo...
Pachinko emakhazeni ka isimo wenkokhelo ugqozi phakathi nesonto kanye iholide
Ngo wamakhaza pachinko, kuyothiwa ihlukaniswe esitolo ukukhombisa isisusa izitolo kanye ngezimpelasonto ukukhombisa isisusa ngezinsuku zeviki. Esikhathini esifanayo pachinko eshintsha, kungani umehluk...
Pachinko emakhazeni ukutshala imali imishini nokumosha kunzima ukunciphisa ukuze ikhasimende
■ Yiziphi isiqalaemva zonke pachinko emakhazeni zokuphatha, kanye nokwehla ibhola uvela yokuthengisa, yingakho kuba izithakazelo inkampani lokususa izindleko ezihlukahlukene.Ngamanye amazwi, uma ukuse...
Pachinko onobuhle ukukhetha isitayela lokulwa nezicaciso
Umshini pachinko, kukhona into okuthiwa Spec. Spec futhi yinani lenombolo esimele ematfuba jackpot. Pachinko lwemininingwane, uzobe bahlukanisa zibe izinhlobo ezintathu eziyinhloko. On jackpot uhlobo ...
Umshini pachinko, njalo ukukhwezwa ROM. Ngakho, hlobo luni into noma ROM, ngingathanda sibheke ukuthi isebenza kanjani. Ngenxa ROM noma ukunquma nangempela ngayibamba, equkethe uhlelo, ezifana ukufiny...
Thola izitolo oncomekayo wamakhaza pachinko imicimbi
Hlobo luni pachinko esitolo noma ukuncoma ukwenza umcimbi, sizobheka ukuthi Pick-ke lapho kunqunywa.■ ngenyanga eyodwa isenzakalo uphawuOkokuqala, kuyinto emakhazeni pachinko, okuyinto ubenomkhankaso ...
Ukuhlaziya onqobayo lula kukhombisa kusukela isimo wafaka wamakhaza pachinko force
Ngo-pachinko eshintsha, efakiwe umkhiqizo ngendlela efanayo njengoba ezinye izimboni, okungukuthi, kukhona model Kunconywa. Indlela uyoncoma imodeli kuhlukile ngamunye wamakhaza pachinko, lapho lokho ...
Ukuqala kwenyanga - ukuqala sasemakhazeni pachinko kwesici (inkathi yokutakula noma evulekile-ukuphila)
※ Uma ubulokhu nje ejwayele ukuhamba njengendlela mkhuba yonke umkhakha ukujabulisapachinko emakhazeni e yereferensi, kodwa angithandi kungenzeka uye waphawula, e wamakhaza pachinko, kanye nesikhathi ...
Ukuze lithole ukuthi lezi imodeli ukunqoba kusukela isimo yokusebenza umshini pachinko
Amamodeli ukuthandwa e pachinko, akukho imodeli. Kusobala, kodwa lokho eziningi amakhasimende imodeli Popular Hlala. Ngakho, ngokushesha nje lapho lubonakale wangena esitolo pachinko, ngicabanga ukuth...
Ukuze uthole ephelele okungenzeka theory of pa o
Wena, indlela ukuqinisekisa big hit in the pachinko ngaphakathi, ngicabanga ukuthi iningi labo zifikelwa engacabangile kakhulu. umshini pachinko, okuyinto ke ukufakwa sasemakhazeni pachinko okungukuth...
Ulwazi oluqoqwe ukwakha inethiwekhi othintana ne abashisekeli, Pachipuro e pachinko eshintsha
Ngicabanga ukuthi kukhona amakhasimende ababona njalo uya sasemakhazeni pachinko. Amakhasimende esishintsha nsuku Shigeku unyawo kuka msebenzi, ukubizwa ngokuthi abashisekeli e pachinko umkhakha. Futh...
Ulwazi oluqoqwe usebenzisa magazini pachinko
Ukuze kini ukuthi pachinko, ngicabanga ukuthi abanye abantu, okuyinto ukuba lifundwe umagazini pachinko. Eminyakeni yamuva, hhayi kuphela umagazini esikhokhelwayo, iphepha ezamahala, njll ngokuhlangan...
Umehluko inqubomgomo ibhizinisi ngenxa indawo wamakhaza pachinko (Station Agents & ezitolo suburban)
Noma yimuphi esitolo, ngicabanga ukuthi kuyinto ukwenza ibhizinisi namadivayisi ahlukahlukene izimo indawo. Pachinko azihlukile esinalo izinyathelo ehlukahlukene ahlukahlukene, ibhizinisi kanye nokwen...
Uwine Indlela Hanemono-Dejihane (imiqondo eyisisekelo)
pachinko kwakamuva, kusukela emshinini Seven isibe kuncike, ngicabanga ukuthi-ke ungene ngisho nalabo abangamazi ke kuthiwa Hanemono. Abanye kulabo abamazi, Hanemono iwukuba kube wenkokhelo ngaphansi,...
Yini ngokuvamile e Horukon iqembu ukucushwa wamakhaza pachinko
Ukulungiselelwa iqembu, kuphendulwa isignali jackpot kusuka ukucushwa Hall seqembu ngalinye kuyoba lowo welula jackpot. Leli Su kwehholo conserver bamba, yilokhu bekulokhu Dasa wacabanga. Lapha, i-con...
Zabasebenzi ngokuvamile sasemakhazeni pachinko kunzima ukunciphisa ukuze ikhasimende